ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ကျနော့်အမြင် (၂)
'စစ်အစိုးရအပေါ်တွင် ကြီးမားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်'
Tell me how? Your arguments are
weak and circular. Sanctions make cronies rich and you ask who are cronies?
Sanctions block opportunities.
Without sanctions, engineers
like you will get opportunites
once graduated, as overseas investments will flow in and
and real engineering skills.
Some of you will be able to
go to western universities
on scholarships like their
peers in neighbouring nations.
Now those cronies can send
children to any university
in the world. Where did that
Steven Law educated, from a
US university. Sanctions only
hurt ordinary Burmese.
Ko Paw... Thanks for your nice presentation....
Anonymous (October 8, 2011 1:28 PM)
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက် မြန်မာအစိုးရအပေါ် စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုဟာ ၁၉၉၇ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှ သက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ၊ လက်ဝေခံတွေနဲ့ သူတို့ မိသားစုတွေအပေါ် ဗီဇာပိတ်ပင်မှုဟာလည်း အဲဒီထက်တောင် နောက်ကျပါသေးတယ်။
စတီဗင်လော (ခ) ထွန်းမြင့်နိုင်တယောက် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရခဲ့တယ်ဆိုရင် အဲဒီလို ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေ မတိုင်ခင်ကသာ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ရှိနေတုန်းမှာ သွားရောက်တက်ယူနိုင်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ မိတ်ဆွေပြောတာ ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်မှုအရ မှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် သူ့အနေနဲ့ အမေရိကန်ကို ဝင်ရောက်ခွင့်တောင် မရှိတော့တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အောက်က လင့်ခ်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ဖော်ပြထားတာကို သွားဖတ်ကြည့်ပါ။ နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရရဲ့ သားသမီးတွေ၊ လက်ဝေခံတွေပါ ဗီဇာအပိတ်ခံရတာကို သတိပြုပါ။
အခု ၂၀၀၈ နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီလို ဗီဇာအပိတ်ခံရတဲ့ စာရင်းကို တိုးချဲ့ထားတာကို သဘောပေါက်ရင် သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ကွက်လုပ်ကွင်း ဘယ်လောက်ကျဉ်းသွားသလဲဆိုတာရယ်၊ အခု ပိတ်ဆိုမှုကို ရုတ်သိမ်းဖို့ တကြော်ကြော်အော်နေတာကို ကြည့်ရင် သူတို့ ဘယ်လောက်တောင် ထိသလဲဆိုတဲ့ အထင်ရှားဆုံးအထောက်အထားပါ။ ဒီလို တကြော်ကြော်အော်နေတာဟာ ပြည်သူလူထု ထိခိုက်တာကို သူတို့က ဂရုစိုက်လွန်းလို့ သူတို့ဒီလို အော်နေတယ်လို့များ ယူဆပါသလား။ ပြည်သူလူထုကို ဖိနှိပ် ဂုတ်သွေးစုတ်နေတဲ့ အစိုးရတွေမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဒုက္ခကို စာနာတတ်တဲ့ နှလုံးသားမရှိပါ။
"Saddled with this family background, Law keepsalow profile and rarely speaks to the international press. Although he travels extensively within Asia, he is banned from entering the US, which refused himavisa in 1996 because of his suspected involvement in drug trafficking."
အင်ဂျင်နီယာ အစရှိတဲ့ အတတ်ပညာရှင်တွေနဲ့ နိုင်ငံသားတွေ နိုင်ငံရပ်ခြားကို ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်တာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခြင်းမခံရတဲ့ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်း၊ တရုတ် အစရှိတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲင်ငံပေါင်းစုံက လူတွေကအစ၊ အမေရိကန်နဲ့ အီးယူက လူတွေအဆုံး ရေခြားမြေခြားမှာ စီးပွားရေးအရ သွားရောက်အလုပ်လုပ်နေကြတာ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ အဆန်းတကြယ်တော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
Sout Yuu Nga paw!
Nyein Hla par lar
Your 96's Batch
>>>အင်ဂျင်နီယာ အစရှိတဲ့ အတတ်ပညာရှင်တွေနဲ့ နိုင်ငံသားတွေ နိုင်ငံရပ်ခြားကို ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်တာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခြင်းမခံရတဲ့ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်း၊ တရုတ် အစရှိတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲင်ငံပေါင်းစုံက လူတွေကအစ၊ အမေရိကန်နဲ့ အီးယူက လူတွေအဆုံး ရေခြားမြေခြားမှာ စီးပွားရေးအရ သွားရောက်အလုပ်လုပ်နေကြတာ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ အဆန်းတကြယ်တော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။<<<
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း Sanction ကို ကန့် ကွက်သူ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်က ပညာရှင်တွေ အများစု နိုင်ငံခြားအလုပ်ထွက်လာတာဟာ ပြည်တွင်းမှ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းလို့ ပါ။ ကိုပေါပြောတဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေ နဲ့ အခြေအနေခြင်းမတူသလို ရာခိုင်နှုန်းခြင်းလည်း မတူပါဘူး။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းရခြင်းဟာခြင်းဟာလည်း Sanction နဲ့ တနည်းအားဖြင့် ဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ပေါ်လာဆို ပြန်မယ့်သူတွေ တပုံကြီးပါ။ ဘယ်သူမှ နေချင်လို့လာလုပ်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။
ကိုပေါအတွေးတွေ တခုတလော သိပ်ချော်နေတယ်။
ကိုပေါရဲ့တနှစ်စာအလွဲများ ပေါ့။
Did you not see any changes until 53 days???
ွသူက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ထပ်လွတ်မှာ စိုးနေတာ။ အပေါ်မှာ ၅၃ ရက်ရှိပြီဆိုတာကြီးနဲ့ ငပေါကြီး ပိုဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ 
Are you expecting and waiting Military Gov would give all the power and country to you? OR Do you want to see Military Gov would be killing people in Revolution ( What u said) created by you?
မင်းကိုနိုင်တို့ လဲ ကိုပေါလို သဘောမပေါက်ကြဘူး။
ကျိုင်းတုံအကျဉ်းထောင်တွင် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသော ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် က သူ့အနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောသည့် တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေး အတွက် မည်သူနှင့် မဆို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည် ဆိုသည့် သဘောထားကို အလေးအနက်အပြည့်အ၀ထောက် ခံကြောင်း၊ NLD ပါတီ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မည်ဆိုလျှင် လည်းထောက် ခံကြောင်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယခုသွားနေသော လမ်းကြောင်းကို ထောက်ခံကြောင်း ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်အတူ ကျိုင်းတုံ အကျဉ်းထောင်တွင် အတူအကျဉ်းကျခံခဲ့ရပြီး ယမန်နေ့ နံနက်ကပြန်လွတ် လာသူနိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးက The Messenger ဂျာနယ်မှသတင်းထောက်ကို ၁၂.၁၀.၂၀၁၁ နေ့ ည ဒေသစံတော်ချိန် ၈း၂၀ နာရီခန့်တွင် တရားဝင်တွေ့ဆုံပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေးအမြင် အမှတ် ၃က လာမယ် ကြာမယ်လား ။ ပရိတ်သတ်တွေ မျှော်နေပြီ။း)
စစ်ကျွန်စော် စစ်ကျွန်နံ့မကင်းသူတွေ တယောက်တပေါက် လာဟောင်နေကြပြီကိုပေါရေ့ မှန်တာကိုပြောရင် သူတို့ရဲ့အနာပေါ် ဆားဖြူးသလိုခံစားကြရလို့ထင်ပါရဲ့၊ ဆက်ကြိတ်ထားကိုပေါ။ နောက်နံပါတ်တွေကို မျှော်နေတယ်။
ဟုတ်ပါ့ ဇာဂနာလဲ စစ်ကျွန်စော်မကင်းပါလား။ :-)
မေး(Mizzima)။ ။အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်တယ်။ ဒီအပေါ်မှာ တချို့က
ဖြေ(ဇာဂနာ)။ ။အဲ့တာကို နှစ်ခုတော့ ကျနော်ခွဲပြောရလိမ့်မယ် တကယ်လဲ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပြောင်းလဲ လာတယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်တယ်။ ဒါလဲ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။ သို့သော် ပြောင်းလဲ လာတယ်လို့ ပိုပိုပြီး ယုံရအောင်၊ ကျနော်တို့
တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပိုပြီး ယုံစေချင်တယ်။ ကျနော်တို့က အခုထိ သံသယတွေ ရှိနေ
တယ်။ ကျနော်တို့ဆီမှာ မယုံကြည်နိုင်သေးတဲ့ စိတ်တွေ ရှိနေတယ်။ မယုံရာကနေ နည်းနည်း၊ နည်းနည်း ယုံလာတယ်။ ပိုပြီးတော့ ယုံရအောင် ဆိုရင် အစိုးရအနေနဲ့ လုပ်ပြဖို့လိုမယ်။
ထင်တယ်။ တစ်က အသုံးချခံနေရတယ်တို့ အသုံးချနေ တယ်တို့ ဆို
တဲ့ စကားအပေါ်မှာ ကျနော့်အနေနဲ့ ချက်ချင်း တုံ့ပြန်ချင်
တဲ့ စကား တခွန်းရှိတယ်။ အဲ့တာက ဘာလဲဆိုတော့ ကျ
နော် တို့က မျောက်လက်ထဲကို ရွှေထည့်လိုက်ရင် မျောက် က ရွှေတန်ဖိုးကို ဘာနားလည် မှာလဲ၊ ပန်းထိမ်ဆရာလက် ထဲကို ထည့်မှ လက်စွပ်တွေ၊ လက်ကောက်တွေ ဖြစ်လာ
မှာ ပေါ့။ အဲ့တော့ အန်တီက အဲ့လို အသုံးချခံရမယ့် လူ
လား။ ရွှေတုံးကြီးကို မျောက်လက်ထဲ ထည့် လိုက်လို့လား။ အဲ့လိုတော့ ကျနော်မထင်ဘူး လေ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပန်းထိမ် ဆရာ လက်ထဲ ရောက်သွားတယ် ဆိုရင်တော့ ဒါကို
အသုံးချ ခံရတယ်လို့ မယူဆရပါဘူး။ အန်တီက အဲ့လောက် ညံ့တဲ့ လူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက တပိုင်းပေါ့။
ဒီတပတ်အတွင်းမှာ အပိုင်း(၃)ကို ရေးပါမယ်။ ကျေးဇူးပါ။
Last few years, U Win Tin and activists cried out "Free ASSK, Talk Dialog, Call Hluttaw (Senate)". Now Daw Su is free and dialog with new government proceeding to reformed country.
Hard liners, now, changed themes again. We never seen superman or super rulers who'll fill all human's needs.
ဦးသိန်းစိန်လာတုန်း အရောင်းရဆုံး စာအုပ်
That is one of the international acceptance on Dr.Than Myint U's wide aspect, an example of his chapter as speaker of Myanmar affairs internationally.
ဆောင်းပါးတွင် “အထီးကျန် တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးဟာ အတိမ်းအစောင်း မခံတဲ့ အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီ။ ကူညီနိုင်ရန် နည်းလမ်းများမှာ” ဟု ခေါင်းစဉ်ငယ်တပ်ထားပြီး နည်းလမ်း သုံးခု တင်ပြထားသည်။
ပထမဦးစျွာားများနှင့် မြန်မြန် တောင်းဆိုမှုတွေကို
အောင့်အီး ရှောင်ကြဉ်ကြပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအား
ပြတ်ပြတ်သားသား ထောက်ခံကြရန် တိုက်တွန်းထားပြီး သို့မဟုတ်ပါက ဒုံရင်းသို့ ပြန်ရောက်သွားမည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့ပြင် အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် လိုအပ်သည့် နည်းပညာအကြံဉာဏ်များ လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြကာ အမေရိကန် ပိတ်ဆို့မှုများ ရုတ်သိမ်းပေးရန်လည်း တောင်းဆိုသည်။
တတိယအားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့မှုအားလုံး အဆုံးသတ်ရေးအထိ ဆောင်ရွက်သွားရန် တင်ပြထားသည်
Dr,Than Myint U.atrue scholar, intellectual scope, brainy head as like as his grandfather, previous his predictions come true and practically. I truly proud of him.
လွတ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး၊ အထဲမှာကျန်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးနဲ့ပြည်သူအများစုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သဘောထားတထပ်တည်းရှိပြီး ပြည်ပက တခါခါကမှ ထထအော်တဲ့ ဘလောဂါ့တချို့ က ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည်ကို ဘာကြောင့် အပြင်းအထန် ဆန့် ကျင်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ဆောင်းပါးလေး တပုဒ်လောက်ရေးပေးပါ။
လူ ညာ ကြီး ...ဆက်ရေး မယ် ဆို ပြီး ရေး လည်း မရေး ဘူး ....
လူ ညာ ကြီး ...ဆက်ရေး မယ် ဆို ပြီး ရေး လည်း မရေး ဘူး ...
အမှတ်(၂) ရေးပြီးခါမှ တကယ်အမြင်မှန်ရသလိုလို၊ အ အမြင်ပဲမှားခဲ့သလိုလို ဖြစ်နေလို့ဘာဆက်ရေးရမှန်းမသိသေးဘူး။
သေချာတာတော့ ထက်ထက်မိုးဦးအကြောင်း ထပ်မရေးရဲတော့ဘူး။
ဟင်...တကယ်လား ကို ပေါ...ထောင်ထဲ က မင်းကို နိုင် က ဒေါ်စု ကို ပါ လီ မန် ထဲ ပါ ဖို့အ ထိ ပါ ထောက် ခံ လိုက် လို့ကို ပေါ စာ ဆက်ရေး ရ ခက် သွား တာ လား...အဲ လို တော့မ လုပ် နဲ့လေ ဂျာ...ကို ပေါ စာ ကို မှ ဖတ် ချင် ပါ တယ် ချို မှ....
Is Ko Paw from Singapore? I tot he is from Russia after reading his posts.